China HRC55 Solid Carbide Twist Drills (5D) mpanamboatra sy mpamatsy | Mingtaishun
Fitaovana mivaingana: Ampiasao ny ZK30UF miaraka amin'ny atiny 10% Co sy ny haben'ny voany 0.6um. Fitaovana: TiSiN, miaraka amin'ny hamafin'ny faritra avo sy fanoherana tsara.
Fandeferana ny savaivon'ny fikosoham-bary isaky ny refy: 0,000 ～ -0.050
Izahay dia mikiry amin'ny votoatin'ny asa “Kalitao Voalohany, manome voninahitra ny fifanarahana ary mijoro amin'ny laza, manome mpanjifa vokatra sy serivisy mahafa-po. ”Ny namana na eto an-toerana na any ivelany dia raisina an-tsitrapo mba hanana fifandraisana ara-barotra mandrakizay miaraka amintsika.
Ankehitriny ny vokatray dia amidy eran'izao tontolo izao sy any ivelany noho ny fanohanan'ny mpanjifa mahazatra sy vaovao. Manome vokatra avo lenta sy vidin'ny fifaninanana izahay, tongasoa ny mpanjifa mahazatra sy vaovao miara-miasa aminay!
Manoloana ny tanjaky ny onja fampiraisana ara-toekarena manerantany, matoky izahay miaraka amin'ny vokatra avo lenta sy serivisy amin-kitsimpo ho an'ny mpanjifanay rehetra ary maniry izahay fa afaka miara-miasa aminao hamorona ho avy mamiratra.
Ny orinasanay dia manana tanjaka be dia be ary manana rafitra tambajotram-pifanakalozana maharitra sy lavorary. Maniry izahay ny hametraka fifandraisana ara-barotra tsara amin'ny mpanjifa rehetra avy any an-trano sy any ivelany amin'ny alàlan'ny tombontsoa manokana.
Teo aloha: Carbide Metal Insert For Milling / Turning RPMT1003MO-TT-DH122
Manaraka: HRC45 Fihodinan-drivotra mahery vaika (5D)
Fampandrenesana miolakolaka Cobalt
Fampianarana lava miolakolaka lava
Fihodinana miolakolaka Carbide
55 HRC NC fitsikilovana fizahana
Haben'ny metrika Dingana atsofoka amin'ny sodina mahitsy
45 HRC NC Spotting Drills ho an'ny alimo
Spiral Flute Step Drill, 7/8 ary 1-1 / 8